Edwin Inki, Mister Malagasy 2018 any Frantsa : Hanampy ireo ankizy eto Madagasikara
Ayna : Malagasy nikatsaka ny “Eurovision”
Maro ireo mpanakanto Malagasy na metisy no manana ny toerany any am-pitan-dranomasina. Isan’izany i Ayna, izay nanomboka nihira tany amin’ny taona 1999 ka mivohy ny gadona R&B.
Dio-XVI Komandona : Hiverina indray, ho fahafaham-pon’ireo mpankafy
Tsy vaovao amin’ireo mpankafy sy “mpiondana” ny gadona rap sy hip-hop ny “Diosezy”, nitondra ilay hira “Komandona”, tany amin’ny taona 1998 tany. Nangina ny tarika tao anatin’ny 20 taona teo ho eo, fa miverina kosa amin’izao, miaraka amin’ny endrika vaovao be…
Johane, Bolo Pixx..: nanamarika iny taona 2018 iny
Maro ireo mpanakanto nanamarika iny taona 2018 iny. Ny hita dia mitombo hatrany ireo tanora mirotsaka ao anatin’ny sehatry ny mozika ary betsaka ihany koa ireo mpihira no vetivety dia nalaza sy voarain’ny olona ny hira noforoniny.
Nandresy tamin’ilay fifaninana “Miss et Mister Malagasy 2018” i Edwin Inki. Tsy nieritreritra ny handray anjara tamin’ity fifaninana ity mihitsy izy, tsy natoky tena firy ihany koa. Rehefa notohanan’ireo manodidina azy anefa izy dia tapa-kevitra ihany. Nody ventiny izany finiavana nananany izany ka izao izy nibata ny amboaran’ny“Mister Malagasy 2018” izao.
Tera-tany Malagasy, avy any amin’ny faritr’i Toamasina, ireo ray aman-drenin’i Edwin Inki. Teraka tao Nîmes Frantsa kosa izy, ka izay no nahafahany nandray anjara tamin’ity fifaninana ity. Na tsy nieritreritra ny haharesy aza izy dia nanana 10 volana kosa niomanana tamin’izany. Nanao izay ho afany rehetra i Erwin mba hampisy lanja kokoa ny fandraisany anjara, ka natoky tena tanteraka izy, taorian’izany, rehefa tonga ny famaranana. 21 taona ny tovolahy, mirefy 1m sy 84 izy, izao lany ho “Mister” izao ary mbola tokan-tena. Manintona azy ireo tovovavy tso-piaina sy tsy be filirony ary mahay manome lanja ny tenany. Tsy miafina kosa nefa fa mahafinaritra azy kokoa ireo tovovavy olioly volo. Reharehan’i Edwin tanteraka ny maha-malagasy azy. Voninahitra ihany koa, hoy izy, ny fahafahana misolo tena an’i Madagasikara. Dingana voalohany eo amin’ny sehatry ny lamaody, ny “shootings”, ny filatroana rahateo ary indrindra, hahafahany manampy ireo zaza sahirana eto Madagasikara.
Miara-miasa amin’ireo kandida niara-nandray anjara tamin’ny fifaninana i Edwin ka nanangana fikambanana antsoina hoe : “Zandry Gasy” izy ireo. Tsy ho ela dia ho tafatsangana io fikambanana io, araka ny fanazavan’i Edwin ary amin’ny alalan’izany no hanampian’izy ireo ny ankizy Malagasy eo amin’ny sehatry ny fianarana, ny fanatanjahantena, ny sakafo ary ny fanodinana akora voajanahary. Hanampy azy amin’ny fampivoarana ny fikambanana ny andraikitra maha “Mister” azy ka hanamora kokoa ny fahazoana fanampiana amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa. Kendrena manokana amin’izany ireo tanora Malagasy monina ao Frantsa, mba hijeren’izy ireo misimisy kokoa ireo tanora mitovy aminy eto Madagasikara.
Manentana ireo tanora any ivelany amin’ny fifanampiana
Ho fanentanana ireo tanora ireo indrindra no nahatonga ny fiaraha-miasa teo amin’ny “Miss et Mister Malagasy 2018” sy ireo mpikarakara ny RNS (Rencontre Nationale Sportive) ao Frantsa. Nanokatra tamim-pomba ofisialy ny hetsika i Edwin, niaraka tamin’ireo tomponandraikitra maro samy hafa. Fihaonana voalohany niarahany tamin’ny Diaspora Malagasy izany sy nahafahany nitafa ihany koa tamin’ireo mpandray anjara amin’ny fifaninana “Miss sy Mister Malagasy 2019”. Nanomboka ny 5 aprily teo dia misy ny fanangonam-bola hamolavolana ireo tetikasa rehetra kasain’ny fikambanana hotanterahina.
Manana fikasana ny ho avy eto, tsy ho ela
Amin’ny volana mey sy jona moa dia hisy fiarahan’i Edwin miasa amin’ny marika any an-toerana, ka izy no ho masoivohon’izany marika izany. Efa ao anatin’ny fikarakarana ny fifanarahana ho an’ny filatroana tokony hotanterahiny amin’ireo volana ireo ihany koa izy. Ankoatra izay dia manana eritreritra ny ho avy eto Madagasikara tsy ho ela i Edwin Inki. “Tamin’izaho telo taona no tany Madagasikara farany, hoy izy, saingy toy ny vao omaly izany. Mbola ato an-tsaiko foana ireo sary sy ireo endrika hitako, na dia efa nihalehibe aza aho”.